အိုကေ၊ ကျွန်တော့်အသည်းကွဲ ဇာတ်လမ်းကိုဘော်ဒါ အတော် များများကို ပြောပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ 'ကိုညီ' သူ ကျွန်တော့်ခံစားချက် တွေကို လျစ်လျူ ရှုတယ်။ ဖုန်းမက်ဆေ့စ်လေးတေစ်ခုကနေ ဖြတ်စာရခဲ့တာပါ သူ့ဆီကနေပြီးတော့လေ။ သူဟာ လိင်ကိစ္စ အတွက်သာ ကျွန်တော့်ကိုတွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အချစ်ဆိုတာ သူ့ အတွက်သေဆုံးသွားပါပြီတဲ့။ ထပ်ပြီးဟန်မဆောင်ချင်တော့တဲ့ အကြောင်း၊ သူ့လိုအင် အတွက် ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ အသင့်ရှိနေခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်ကို ကျေးဇူးတော့တင်ပါသတဲ့။ အကြောင်းပြချက် ဒါမှမဟုတ် သူ့ရင်ခုန်သံဟာ ကျွန်တော့်အပေါ် ဒီလို တကယ်များ သဘောထားခဲ့သလား? ကျွန်တော်လေဟန် မဆောင်နိုင်စွာပါပဲ ဖုန်းမက်ဆေ့စ်တွေပို့တယ်၊ ဖုန်း ခဏ ခဏ ဆက်ပြီး စကား ပြောဖို့ကြိုးစားတယ်၊ သူ့အိမ်နား ကို ရောက် အောင်သွားပြီးတွေ့ဖို့ကြိုးစားတယ်။ တုန့်ပြန်မှုကတော့ နတ္ထိ ပါ။ ပြင်းပျနေတဲ့ ကျွန်တော့်အ ချစ်စိတ်တွေ လေထဲ လွင့်မျော ကုန်သလို သူဘာကြောင့် ဆိုတာတော့ မြင်ယောင် ကြည့်လို့ရပါရဲ့။ သူ့ ပတ်ဝန်းကျင်က အဆင်ပြေစွာတွေ့နိုင် ကျွန်တော့်ထက် လိုအင်ဆန္ဒဖြည့်စွမ်းပေးနိုင်သူနှင့် ရှေ့ဆက်ဖို့ဆိုတာ။
ယုံကြည်နိုင်တာက ကျွန်တော် အလွန့်အလွန် သူ့ကိုလွမ်း နေခဲ့တာ။ ကျွန်တော်တို့နှင့် ပုံစံတူအဖြစ်အပျက်တူ ကောင် လေးတွေအတွဲ ကို မြင်ရပေမဲ့ နှိုင်းယှဉ်မရခဲ့ပါ။ ကျွန်တော် 'ကိုညီ'နှင့် အိပ်ယာပေါ်မှာ တူယှဉ်တွဲနေခဲ့တုန်းက ဘာ Role ဘာသတ်မှတ်ချက်မှ မထားခဲ့ ဘူးပါ။ တွေ့ကြတဲ့အခါ သူဘာ လိုချင်သလဲ ၊ ကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်သလဲ အပေါ်သာ မူတည် ခဲ့ကြတယ်။ အခု Oral sex အရမ်းလုပ် ချင်တာပဲ။ မနက်က ခဏတွေ့ဖြစ်တဲ့ 'ဝေဟန်'နှင့် လုပ်ဖြစ်တော့ သူရာဘာအစွပ်ကို အသုံးပြုတယ်။ အဲဒါကို ပါးစပ်ထဲထည့်ရတာ -ိင်တံ အစစ်အမှန် ကို စုပ်ရတယ်လို့ ဖီလင်မရပါဘူး။ ရာဘာတစ်ခုကို ၀ါးနေရ သလိုပါပဲ။ ဝေဟန်က အားနာပြီး flavor အမျိုးမျိုးပါတဲ့ အစွပ် တွေကိုပြတယ် သုံးကြည့်တယ် ကျွန်တော့်အတွက် ဟင့်အင် ပါပဲ။ ကိုညီရဲ့ -ီးလို အစစ်အမှန်အရသာမျိုး အာမတွေ့။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိထားကြည့်မိမှ 'ကိုညီ'နဲ့ လမ်းခွဲခဲ့ပေမယ့် ကျွန်တော်နှင့်match ဖြစ်တာ၊ အာသာဆန္ဒပြင်းပြမှုခြင်းတူတာ မတွေ့ မိသလို၊ သူ့အပြုအစု၊ သူ့အပွေ့အဖက်များဟာလည်း တခြားသူများထက် ကျွန်တော့်ကို ရင်ခုန်တိမ်းမူးစေနိုင်တာ အခုထိ တသနေ စေတာမျိုး မရှိတာကို သိရပါရဲ့။ ဒါအရိုးသားဆုံး ပြောခြင်းပါ။
ကြိုးစားပါများတော့ နောက်ဆုံးမှာ ကိုညီတစ်ယောက် ဖုန်းထဲက စကားတွေပြန်ပြောလာတယ်။ အရင်က နှစ်ဦးသားကြားဘာမှ မဖြစ် သလို ချိုချိုသာသာ။ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မယ့် အချစ်ကျောင်း အတွက် ရာသီအစပေါ့။ ဖုန်းပြောရင်း နှုတ်ဆက်ဖြစ်ကြတော့ အရင်ကလို dirty talking လေးတွေနှင့် အသံဖြင့် အာဘွားဖြစ်ကြပါလေ့။ အဆုံးသတ်အဖြေက အခုလာမယ့် တနင်္ဂနွေမှာ တွေ့ဆုံကြဖို့ သူကပြောပါ တယ်။ ဒီလိုလေး ပြောတာကိုက အပေါင်းလက္ခဏာတွေ ရရှိခြင်းပါ။ ချိုချိုသာသာ စကားလေး တွေ အနမ်းလေးတွေ ကြားရတာ ကျွန်တော့်ခံစားချက်တွေ ပြန်လည် ရှင်သန်ပြည့်စုံလာစေသလိုပါပဲ။
ကျွန်တော် အခန်းကို အမြန်ဆုံးပြန်လည်ရှင်းလင်း၊ သူကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ရိုးတံရှည် နှင်းပန်းတွေကို အခန်းအနှံ့ မွှေးပျံ့စေတာ ပန်းအိုးလှ လှလေးတွေနှင့်ပေါ့။ အိပ်ခန်းပြတင်းနားက ဘွန်ဆိုင်းပင်ပုလေးနှစ်ခုကိုလည်း ပြန်လည်သရတယ်။ သူက စိမ်းလန်းခြင်းကို နှစ်သက်သူ မွှေးပျံ့တာကိုလိုလားသူလေ။
အလုပ်မှာ၊ အိမ်မှာ သွားလာလှုပ်ရှားရင်း ရောက်လာတော့မယ့် တနင်္ဂနွေနေ့ကို ရင်ခုန်စွာစောင့်နေမိပါရဲ့။ လာမယ်လို့ သူ ကတိပေးထား တာပဲလေ။ သူ ကျွန်တော့်ကို စိတ်ပျက်စေမှာ မဟုတ်ဘူး။ သူ့ရယ်မောသံကို ကျွန်တော်အား ကူးစက်စေ မှာပါ။ နောက်ဆုံးအကြိမ်တွေ့ခဲ့ တုန်းက အိမ်ဧည့်ခန်းမှာ နှစ်ကိုယ်တူချစ်ရည်လူးကြတာ ကိုဗီဒီယိုရိုက်ထားကြဖို့ ဖြောင်းဖျဖြစ်ခဲ့ ရိုက်ကူးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကြည့်မိသူတိုင်း စိတ်ကြွလာစေ မယ့် ရိုက်ချက်၊ မာန်ဟုန်ပြင်းတဲ့ သရုပ်ဆောင်များပါတဲ့ ဗီဒီယို လေးဖြစ်ပေမဲ့ သူက လုံးဝပြန်မကြည့်ခဲ့တာကြောင့် ကျွန်တော် လည်း ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ပါရော။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဘာရည်ရွယ်ချက်မှမရှိ မှတ်တမ်းသဘောပဲ ယူဆခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ သူကတော့ အဲဒီကိစ္စနောက်ပိုင်း ကျွန်တော့်ကို ခွာစပြုလာတော့တာ။
နောက်ဆုံး 69 sucking လုပ်တုန်းသူပြောတာလေးကို မှတ်မိ ပါသေးတယ်။
ဖျော်ပေးထားတဲ့ လိမ္မော်ရည်အေးအေးလေးကို သူသောက်ပြီး အခန်းတ၀ိုက်က ပန်းအိုးလေးတွေကို မသိမသာသူကြည့်တယ်။ နောက် တော့ ဖန်ခွက်ကို အသာပြန်ချကာ ဘေးနားမှာထိုင်နေ တဲ့ ကျွန်တော့်ကို လှမ်းဖက်တယ်၊ လည်တိုင်တွေကို နမ်းတယ် တစ်ချက်။ ဒါပဲလား? အလိုက်သိစွာ ပြန်လည်ပွေ့ဖက်လိုက်ရင်း သူ့ရင်အုပ်တွေ ကျောပြင်တွေကို နုညံ့တယ်လို့ သူပြောပြော နေတဲ့ ကျွန်တော့် လက်ဖ၀ါးတွေနဲ့ ပွတ်သပ်မိပါရဲ့။
ခဏတာ ငြိမ်သက်နေပြီးနောက် သူကျွန်တော့်ပေါင်ပေါ်ကို ခေါင်းအုံးပြီး လှဲချလိုက်ပါရော။
ရေကူးဒိုင်ဗင် သင်တန်းတက်ခဲ့တုန်းက အသက်ရှူရှိုက်တဲ့နည်း တစ်ခု သင်ခဲ့ရဖူးတယ်။ ပါးစပ်ကိုဟ လေကို ပြင်းပြင်းရှိုက် နောက်တော့ အဲဒီဝင်လေကို လေးငါးမိနစ်လောက် ထိန်းသိမ်း နိုင်မယ့် လေ့ကျင့်မှုလေးပါ။ အခုအဲဒီ့နည်းအတိုင်း သူ့ရဲ့ ရှည် လျားလှတဲ့ -ီးတစ်ချောင်း လုံးကို ဟိုးအာခံတွင်းထဲထိ ရှိုက် သွင်းလိုက်တယ်။ ရွှေဥတွေနှင့် ကျွန်တော့်မေးစိတွေထိကပ် တဲ့အထိ သွင်းပြီးငြိမ်သက်နေပြီးမှ ဖြည်း ဖြည်းပြန်ထုတ်၊ ကွမ်း သီးခေါင်းရောက်တော့ လျှာကလေးနှင့်ခဏကလိ၊ပြီးမှ တဖြည်း ဖြည်းပြန်မျိုချတာ အဆုံးထိ။ ကိုညီနှင့် ဆက်ဆံပတ်သက်ရတိုင်း အမှတ်ရလာတာကတော့ သူကျေနပ်အောင် ကြိုးစားရင်း တဖြည်းဖြည်း cock sucking လုပ်တာရဲ့အထာကို ပိုပိုသိလာ ခြင်းပါ။ ကိုယ့်အတွက်အထူးသီးသန့် ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရော ချစ်ခြင်းကြောင့်ရော စိတ်လိုလက်ရ လုပ်ပေးဖြစ်ရ ခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက် ဆိုပါတော့။
အသက်ကို မျှင်းမျှင်းရှူရှိုက်ရင်း နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာထဲ တိုးတိုး ၀င် လာတဲ့ သူ့-ီးကို လျှာနဲ့ရစ်ရစ်ပြီး ကလိပေးရင်း လည်ချောင်း ထဲထိ မျှော သွင်းချိန်မှာတော့ သူ့တင်ပါးလုံးကျစ်ကျစ်တွေကို ထိန်းကိုင်ပေးဖြစ်ပါတယ်။ balls တွေကျွန်တော့်မေးစိကိုထိကပ် ချိန်မှာ လက်ချောင်း လေး တွေသုံးပြီး ထိတွေ့ကစားပေးရတာ အရွယ်ညီ စတီးလုံးတွေကို ကစားရသလိုပါ။ ပွတ်သပ်တာမလုပ် ဘဲ တစ်ခါတစ်ခါ ညှစ်ပေး လိုက်တော့ သူမျက်လုံးတွေ မှေးမှိတ် သွားရင်း 'အား....ရှီး' ဆိုပြီး ခြေချောင်းလေးတွေတောင် တဆတ်ဆတ်တုန်ရဲ့။
လူတစ်ယောက် အထူးသဖြင့် ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ အကြိုက်ကို မှတ်မိနေခြင်းက ပညာပဲထင်ပါရဲ့။ သူ့-ီးရဲ့ ဆိုဒ်ကလည်း sucking လုပ်ဖို့အ ကောင်း ဆုံးဆိုဒ်ပါပဲ။ သန့်ရှင်းမှုရှိခြင်းကလည်း နှစ်သက်စေသလို သူ့ရွှေရည်တွေ ပါးစပ်ထဲအပြည့်ပန်း ထည့် ပေးတာကိုလည်း အရသာ ခံရတာ ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။ နှစ်ယောက်သား ဒီကိစ္စမှာ flesh to flesh လုပ်ရတာပိုပြီးချစ်တယ်။ ကိုညီနှင့်ဆို ကျွန်တော် condom မသုံးဘူး။ သူ့ personality ၊ သူ့ charisma တွေက အမြဲ ကျွန်တော့်ကို နွေးထွေးလွန်း တက်ကြွစေလွန်းပါတယ်။
လည်မျိုထဲက ထုတ်လိုက်၊ ပြန်သွင်းလိုက် သူ့ p-hole လေးကို လျှာနဲ့ကလိလိုက်တော့ ငပဲဟာပိုပြီးထွားလာတယ်လို့ ခံစားရမိစပြု လာပါပြီ။ Wow! ဘယ်လောက်တက်မက်ဖို့ကောင်းတဲ့ဟာ ပါလိမ့်။
ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ အားလုံးဝင်ဖို့ဆိုရင် ဖြည်းဖြည်းခြင်းပြန်သွင်းရမယ်။ တော်ကြာ အာဗြဲစိန်ဖြစ်သွားမှာ...ဟီး။ လက်နဲ့ အရင်းကို အ သေအချာဆုပ်ကိုင် မာကျောပြီး တဆတ်ဆတ် တုန်နေတဲ့ ကိုညီ့ဟာကြီးကို ထိပ်ပိုင်းလေးပဲ လျှာနှင့် ရေခဲမုန့် ကို လျှက်သလို ဝေ့၀ိုက် ကွမ်းသီးခေါင်းကို ဖြည်ဖြည်းငုံကာ အထုတ်အသွင်းပြု တစ်ချက် တစ်ချက် အာခံတွင်း အတွင်းပိုင်းထိ ဖိကပ်....အိုး...ဒီပစ္စည်းကို လွမ်းရ တပ်မက်လိုက်ရတာ။
တင်သားဆိုင်တွေကို သူ့လက်ဖျားတွေနဲ့ ခပ်ပြင်းပြင်းရိုက် ခတ်ရင်း နာကျင်မှုကြောင့် ပြောင်းလဲသွားတဲ့ ကျွန်တော့မျက်နှာ အမူအရာကို ဖီးလ်ယူသလားမသိ ရဲပြီးနီသွားတဲ့ လက်ရာတွေ ကို သူပြန်ပြီးပွတ်သပ်ကြည့်နေပါတယ်။ ငြင်ငြင်သာသာ ကိုင်နေရာကနေ အသားကုန် ညှစ်တယ် နာကျင်မှုကြောင့် ကျွန်တော်အော်လိုက်မိတဲ့အသံကို သူသဘောတကျ ရယ်များပင်ရယ်သေးတော့တာ။
အဆုံးထိ ဖိဖိသွင်းလိုက်တဲ့အချိန် သူ့ရွှေဥတွေနှင့် ကျွန်တော့် တင်ပါးတွေ ထိကပ်သွားတဲ့အခါတိုင်း ထူးဆန်းစွာ နာကျင်မှုက အဝေးကို ရောက်ရောက်သွားတယ်။ အပြင်ကိုထုတ်လိုက် အ ဆုံးထိ ဖိကပ်လိုက်နှင့် စည်းချက်ကို မှန်နေတာပါ။ ချောဆီ ခပ်များများကြောင့်လည်း အဆင်ပြေနေတဲ့ကျွန်တော်က သာယာမှုနဲ့မျောနေတာ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ဘာတွေဖြစ်နေတာ၊ ဘယ်သူက ဘာဆိုတာ မသိတော့ သလိုမျိုး ကိုညီနှင့်အတူ နှစ်ဦးသားအလိုက်သင့်။
လှုပ်ခါနေတဲ့ တင်သားဆိုင်များ၊ မှန်နံရံကမြင်နေရတဲ့ နှစ်ဦး သားရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာလှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေ အော်ညည်းသံသဲ့သဲ့ စတာ တွေကြောင့် ကိုညီ ပိုမိုစိတ်လှုပ်ရှားကာ သူ့ဆောင့်ချက်တွေ အ ထုတ်အသွင်းတွေက တစ်မျိုးတစ်မည်ဖြစ်လာပြီး သကာလ အပြင်ကို ရုတ်တရက် ဆွဲထုတ် condom ကိုချွတ်ကာ ကျွန်တော့် ကျောပြင်ပေါ် နွေးကနဲ နွေးကနဲ။
'နောက်တစ်ခါ ငါ့ယုံကြည်မှု၊ ပြီးတော့....အထင်လွဲစေမယ့် အ လုပ်တွေမလုပ်နဲ့'
မျက်ရည်လေးဝေ့ကာ သူ့ကိုငေးကြည့်ဖြစ်ရပါတယ်။ လက်သီး နှင့် ထိုးခံရတာကိုတောင် မနာနိုင်တော့ဘူး။ သူကတော့ အခုမှ စိတ်ဆိုး ပြေသွားတဲ့ အမူအရာဟန်ပန်များဖြင့်ပေါ့။ ခုတင်ပေါ်က ကျွန်တော် ထရပ်ပြီး ရေချိုးခန်းဆီအသွားသူက လှမ်းဆွဲပြီးဖက်တာ ကျစ်ကျစ် ပါအောင်။ ဘယ်မှမသွားပါဘူး မသွားပါဘူး ဗျာ...ကိုညီရှိရင် ကျွန်တော့်ဘ၀ပြည့်စုံပါပြီ။
Note: ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတွေရေးဖွဲ့ဖြစ်သော ၂၀၁၀ ၀န်းကျင်လောက်က ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ။